काठमाडौँ । साताको सुरूवातदेखि नै लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजार आज पनि सम्हालिन सकेन ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३.४६ अङ्कले घटेर एक हजार १६३.२१ मा पुगेको छ ।
त्यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.७९ बिन्दुले घटेर २५४.७८ मा पुगेको छ ।
स्टकका अनुसार आज कूल १७१ कम्पनीका १५ लाख तीन हजार ९२८ कित्ता शेयर रु. ३४ करोड १७ लाख ४५ हजार १३६ मा कारोबार भयो ।
कारोबार भएका १२ उपसमूहमध्ये एउटा समूहको मात्र शेयर झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ । सामूहिक लगानी कोषको शेयर ०.०२ अङ्कले बढेको छ ।
बैङ्किङ १.७५, व्यापार ०.४२, होटल ३४.८४, डेभलपमेन्ट बैँक ४.७८, हाइड्रोपावर २.५९, फाइनान्स ०.३२, निर्जीवन बीमा ४९.०३, उत्पादन ८.६६, अन्य ०.३२, माइक्रोफाइनान्स ५.८१ र जीवन बीमा ३१.४७ अङ्कले घटेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा सोल्टी होटल लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रह्यो । सोल्टीको शेयर रु. चार करोड ५५ लाख ५१ हजार ६५२ मा कारोबार भयो ।
लक्ष्मी बैँकको संस्थापक शेयर रु. एक करोड ९० लाख ४१ हजार ६४८, छिमेकी लघुवित्त विकास बैँकको रु. एक करोड ४२ लाख ७८ हजार ८४, नेपाल बैँकको रु. एक करोड ३७ लाख ३१ हजार ५४३, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु. एक करोड २९ लाख ६१ हजार २६३ र प्रभू बैँकको शेयर रु. एक करोड २० लाख ७६ हजार ४९ कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
घटेको बजारमा घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका शेयरधनीले ४.४१, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ४.०४, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट बैँक एण्ड फाइनान्स कम्पनी ३.४८, नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैँक रु. ३.४६ र अरुण काबेली पावरका लगानीकर्ताले २.८६ प्रतिशतले कमाए ।